Burmese taste - Iora: ခံစားမှုပေးတဲ့နေရာလေး
Posted by Iora at 8:07 PM
စံပယ်ချို February 8, 2013 at 10:03 PM
ချယ်ရီပင်အောက်က ပွင့်ဖတ်ခရမ်းရောင်လေးတွေ တွဲတွဲလေးကျနေတဲ့ပန်းက
ဂျက်တို့တောင်ကြီးမှာ အများကြီးပဲ ပန်းနာမည်တော့မသိပါဘူး
တခြးပန်းလှလှလေးတွေကို အမြဲမြင်ရတဲ့ပြတင်းပေါက်လေးတခု တော့ ဂျက်ကိုယ်တိုင်လဲ လိုချင်မိတယ်
san htun February 9, 2013 at 6:58 AM
အယ်.တူနေတယ် ပြတင်းပေါက်ချစ်တာခြင်း..ပန်းကလေးတွေကလည်း လှလိုက်တာ..ဒီဖက်မှာ မတွေ့ ဖူးဘူး..ပြတင်းပေါက်အသစ်လေးကနေ မြင်ရမယ့် အကြောင်းလေးတွေ စောင့်နေပါတယ်နော်..
Candy February 9, 2013 at 7:54 AM
ပန်းလေးတွေ အရမ်းလှတာပဲ မမ... မမဘယ်သွားမလို့လဲဟင် :( :( :(
Iora February 9, 2013 at 2:14 PM
စမ်းချောင်းလေးမဟုတ်ပေမဲ့ရေကန်လေးလည်းမြင်နေရတယ်။ ပြူတင်းအသစ်လေးအကြောင်းရေးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အချိန်အရမ်းရှားနေတယ်ကွယ်။ ပြူတင်းပေါက်ချစ်တာချင်းတူလို့ စန်းထွန်းကိုပုိုချစ်သွားပြီ။း)
ရာသီအလိုက်ပွင့်တဲ့တခြားပန်းလေးတွေလည်းရှိသေးတယ်။ သိပ်လှတာဘဲ။ အချိန်ရတဲ့အခါမှတင်လုိုက်မယ်နော်။
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 10, 2013 at 2:49 AM
ပန်းလေးတွေရော ....ပြတင်းပေါက်က မြင်နေရတဲ့ ရှုခင်းတွေအားလုံးကိုရော ပြတင်းပေါက်လေးကိုရော
အမြဲရှိနေတာမလား.......ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ မရယ်...ချက်ချင်းကြီးတော့ ဘယ်မေ့နိုင်ပါ့မလဲ
အချိန်ကြာလာလို့ တခြားနေရာဒေသတစ်ခုမှာ အသားကျကျစီးမြောမိတဲ့အခါကျမှ နေသားကျသွားမယ်ထင်ရဲ့
အဲလိုပဲ မျှော်လင့်မိတယ်...:) ပန်းလေးတွေ အရမ်းလှတယ်မ ရှုခင်းလေးတွေလဲ အချိန်ရရင်တင်ပေးပါအုံးနော်
(အမအိမ်လေးကို မိုးနတ်တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးခဲ့ပါဘူးးးးးး ခုမှ ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်...
နောက်လဲ အမြဲလာလည်လို့ရအောင် လင့်ချိတ်ထားလိုက်ပါပြီ....)
Sweety Snow February 10, 2013 at 3:57 AM
မမရေ.. အဲဒီပြတင်းလေးကိုမြင်တော့ ညီမလေး ခုနေနေတဲ့အခန်းရဲ့ ပြတင်းပေါက်ကလေးနဲ့တူလို့ နောင်တစ်ချိန် ခုနေရာလေးကို ခွဲပြီး ထားခဲ့ရမယ်ဆိုရင် မမလို ခံစားချက်မျိုးဖြစ်လာမှာ အသေအချာပဲ ;( .. ညီမရဲ့ ပြတင်းပေါက်ရှေ့က တိုက်ခန်းတွေကတော့ ရှေ့မျက်နှာစာတွေ.။ ပန်းပင်တစ်ချို့လည်းရှိတယ်။။။ နေရာသစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ မမ.။
You'll find new lovely window soon,i hope.I'll just sit beside with you at that new one watching beautiful scene,trees,bushes,flowers and birds in this blog.Currently I try to go Moeyunngyi for bird watching and miss you.
Iora February 10, 2013 at 10:16 AM
ခင်ခင်မင်မင်နဲ့ အရောက်လာခဲ့လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ အားတဲ့အခါစိတ်ပါတဲ့အခါထပ်လာလည်ပါလို့ လည်းဖိတ်ပါတယ်။း)
အဲဒီပန်းလေးတွေကလေ..သေချာကြည့်လေချစ်စရာကောင်းလေဘဲ။သိလားညလေး။ နေရာသစ်ကရှုခင်းလေးအားတဲ့အခါတင်ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့ ။
ဒီနေရာလေးတွေကတမျိုးဘဲ။ ပန်းခြံတွေကိုအိမ်နောက်တွေမှာထားကြတာများတယ်။ မိသားစုတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်အပန်းဖြေနုိုင်ကြအောင်လို့ ထင်တယ်။ နေရာသစ်မှာအသားမကျသေးဘူးစနုိုးရေ။ ပျော်ရွှင်ချင်ပါတယ်။
ွMy dearest Gyidaw...
I think, because of your wish I foundanew lovely window giving the scene of beautiful trees and birds and lake. I hope we can sit together feeling the pleasant scene in this blog later or sooner. :)
You will love the scene of Moeyungyi if it is the same as I had seen before.
But I think Jan is the best to visit there.
I miss you too. You always bring the happiness for me.:)
မိုးငွေ့........ February 11, 2013 at 1:21 AM
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ဆရာမခင်ခင်ထူးရဲ့ နွေသီးကိုသတိရမိသွားတယ်....။ ၀တ်ရည်စုတ်ငှက်ကလေးတွေလာနားတဲ့ ပန်းလေးတွေကို သိပ်ကြိုက်တာပဲ အရမ်းလှတယ်...။ အဲလို ပြူတင်းပေါက်တစ်ခုကိုတွယ်တာတတ်တဲ့ ခံစားမှုမျိုးရှိခဲ့ဖူးတယ်... တစ်နေရာတည်းကထိုင်းပြီး လှပပြန့်ပြူးတဲ့ အတွေးစလေးတွေနဲ့ ချစ်စဖွယ် လွမ်းစရာ ပို့စ်ကလေးတစ်ခုကို ရေးသွားတာလေးကြိုက်တယ်...။ ဟုတ်တယ် လူတိုင်းက မမြဲမှန်းသိလဲ တွယ်တတ်ကြသူမျိုးကိုးး...။
Iora February 11, 2013 at 2:33 PM
မန့် ထားတာလေး Spam ထဲကနေခုမှတွေ့ လို့ ပြန်တင်လုိုက်ပါတယ်။
ရေးထားတာကြိုက်တယ်ဆုိုလို့ ဝမ်းသာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော့်။း)
Ma Tint February 11, 2013 at 5:45 AM
ပေါ်မလာတာကြာပေါ့ အိုင်အိုရာရေ... ပေါ်လာပြန်တော့ နှုတ်ဆက်စကားမျိုးကြားရတော့
ပြူတင်းပေါက်လေးကို ကာယကံရှင်နဲ့အတူ လွမ်းသွားတယ်။
လှပတဲ့ဝန်းကျင်ကို မခွဲချင်ပေမယ့်လည်း အချိန်တန်ရင်ခွဲရတာ ဘယ်သူမှလွန်ဆန်လို့မရတဲ့
သဘာဝတရားမို့ ဒီထက်မကကျေနပ်စရာ နေရာလေးတစ်နေရာကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပါစေလို့။
Iora February 11, 2013 at 10:09 AM
တီတင့်လည်းစိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ နေ့ စဉ်ပေါင်းများစွာကျော်ဖြတ်နုိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ရှင်။
ကောင်းမွန်ဝင်း February 15, 2013 at 10:08 PM
ပြူတင်းသစ်အကြောင်းရေးဘို့ အရှိန်ယူနေတယ်။ သိတဲ့အတုိုင်းဘယ်တော့မှတင်ဖြစ်မယ်တော့မသိ။
ယုံပါတယ်။ ခလေးတွေနဲ့ ဆုိုတော့သိပ်အလုပ်များမဲ့အပြင်တခြားအလုပ်တွေလည်းအရမ်းလုပ်နေတော့ဘယ်အားမလဲနော်။
ညီလင်းသစ် February 17, 2013 at 3:25 PM
မအိုင်အိုရာရေ.. ခုတလော အလုပ်တွေများနေလို့ အခုမှပဲ ရောက်လာရတယ်ဗျာ...၊
စာတစ်ကြောင်းချင်းစီကို ဖတ်လိုက်၊ ရှင်းပြထားတဲ့ ပုံလေးတွေ ကြည့်လိုက်နဲ့ အဆုံးသတ်လည်းကျရော ဝမ်းနည်းသွားမိတယ်..၊း(
ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုး၊ ဒီလို ပန်းတွေ ဝေဝေဆာဆာ၊ အရွက်တွေ စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့ ရှိတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးဟာ သတိတရနဲ့ အမှတ်ရနေစရာ ဆိုတာ
ယုံမှားသံသယ မရှိပါဘူး...၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပြူတင်းပေါက်လေးတွေနဲ့ မအိုင်အိုရာ ဆုံစည်း နိုင်ပါစေဗျာ...။
သီရိရတနာ February 19, 2013 at 4:25 PM
Iora ရေ .. နေရာသစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေနော် ....
အမေရိကားမှာ .. အဲလိုမျိုးပဲနော် .. နေရာတွေ ရွှေ့နေရတာ ... အလုပ် အခြေအနေပေါ်မူတည်ပီး ပြောင်းရ ရွှေ့ရတာ အမေရိကန် စတိုင်များလားပဲ .... နေရာသစ်မှာ စိတ်သစ်၊ လူသစ်ဖြင့် အစစ လန်းဆန်း တက်ကြွပြီး ပျော်ရွှင်ပါစေ ညီမရေ ...
Iora February 19, 2013 at 7:50 PM
ဆုတောင်းလေးနဲ့ ကွန်မန့် လေးအတွက်ကျေးဇူးပါနော်။
ခုတော့အလုပ်တွေများလွန်းလို့ သိပ်မတက်ကြွနုိုင်သေးဘူးရယ်။း(
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) February 21, 2013 at 11:31 PM
ဒီလောက်တောင် အပင်တွေစုံလင်ပြီး အေးချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့ နေရာလေးကို ခွဲခဲ့ရမှာ ဘယ်သူက စိတ်ချမ်းသာပါ့မလဲနော်။
ပြူတင်းပေါက်လေးကလည်း တွေးချင်တိုင်း တွေးချင်စရာ ငေးချင်တိုင်း ငေးချင်စရာရယ်။
ရိုစ့်မေရီခြုံကြီးမြင်တော့ လိုချင်လိုက်တာလို့ ပါးစပ်ကတောင် အသံထွက်မိသေးတယ် အားရစရာကြီး။
ပန်းတွေကို ချစ်တတ်တဲ့သူဟာ စိတ်သဘောနူးညံ့တယ်တဲ့လေ။ ပြီးတော့လဲ ခင်တွယ်တတ်တယ်လို့ ကြားဖူးတယ်
ဒါကြောင့်လည်း နေရာသစ်တစ်ခုပြောင်းဖို့ကို ခံစားနေရတာဖြစ်မယ်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် နေရာသစ်မှာ အမြန်ဆုံးပျော်ရွှင် အဆင်ပြေပါစေနော်။
Iora February 22, 2013 at 6:12 PM
ကုိုယ်ကပန်းတွေလည်းချစ်တယ်။ အပင်တွေလည်းချစ်တယ်။ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုလည်းချစ်တယ်။ သနားတတ်တယ်။ ခင်တွယ်တတ်တယ်။
Iora February 22, 2013 at 6:14 PM
မြသွေးနီ February 26, 2013 at 2:45 AM
အရောင်အသွေးစုံနဲ့ ပန်းပွင့်လေးတွေကြောင့် စိတ်ထဲ ကြည်လင်လန်းဆန်းသွားရတယ်..
မီးမီးငယ် March 11, 2013 at 12:12 AM
တောမှာက ကိုးနတ်ရှင်မကောင်းတာနဲ့ လူမအားတာနဲ့ ..
အင်တာနက်တို့ အင်တာပြာတို့ ဆိုတာ ကိုယ်တို့ နဲ့ မဆိုင်သလိုပါဘဲ...
ဟိုပြန်ရောက်ရင် ရှမ်းအစားအစာတွေနဲ့ မအိုင်အိုရာကို ပြန်ဆွယ်မယ်နော်..:P
နေရာသစ်တခုဆုိုပါတော့။ အရင်ကတော့လာလည်တဲ့နေရာပေါ့။ နောက်မှပို့ စ်တင်မယ်လေနော်။
ရှမ်းစာလေးတွေနဲ့ အဆွယ်ခံချင်လှပြီနော်။့း))
Thamee Su April 6, 2013 at 12:31 AM
မမအိုင်အိုရာရေ ခုမှရောက်လာရတယ် ပန်းလေးတွေကြည့်ပြီးလွမ်းလိုက်တာ
ဆုမြတ်မိုး June 16, 2013 at 6:03 PM
ပန်းလေးတွေလှလိုက်တာ အမရယ်..း)